Izahay vs anao! Voahaja ve ianao? | Martech Zone
Alarobia 13, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa avy namaky vitsivitsy Toned In, Tena nahaliana ahy ny iray amin'ireo fanontaniana napetraky ny ekipa tao Fivarotana Pragmatika. Miresaka momba ny orinasanao ve ny tranokalanao sa miresaka momba ny mpanjifanao?
Na dia zava-dehibe aza ny manamarina ny fahefanao amin'ny habaka misy anao, zava-dehibe kokoa aminao ny miresaka amin'izay azonao tamin'ny mpanjifanao. Nametraka ny fanontaniana aho tamin'ny Twitter ary nahasarika ny sain'ny olona vitsivitsy, anisan'izany Andy Beal of Marketing Pilgrim.
Nanapa-kevitra ny hizaha toetra ny tenako aho… miresaka momba ny tenako bebe kokoa amin'ny bilaogiko ve ny momba ireo mpamaky? Nanoratra Calculator iray namboarina mba hahitako! Ny calcul dia mamaky ny sakafonao ary mandrefy ny habetsahan'ny Izaho, izaho, izahay, ianao, ianao, izahay, sns. amin'ny atin'ny fahana. Milanja anaram-boninahitra lehibe kokoa koa!
Ireto ny valin'ny bilaogiko, iray amin'ny 9:
Midika izany amin'ny ankapobeny fa miresaka momba izany aho ianao ny ankamaroan'ny fotoana! Mahaliana tokoa, napetrako ny adiresy fahana an'ny sasany listers A lehibe ary ny valiny dia mihoatra ny refy! Omeo tifitra izy! Raha mahita Narcissists (isa 0) ianao dia ampahafantaro ahy! Nahafinaritra ahy ny nitondra ny lohatenin'ny valiny.
Ary aza hadino ny maka kopia iray Namboarina: esory ny fahafaha-manao hafahafa izay mitarika amin'ny fandrosoana amin'ny orinasa. Boky miavaka amin'ny fifandraisana mahomby amin'ny mpanjifa sy ny prospect mba hampitomboana ny orinasanao. Ny mampiavaka ahy indrindra amin'ilay boky dia ny fizarana tsirairay izay manome ohatra tena misy eto amin'ny orinasa Tuned In!
Tags: lehiben'ny mpivarotrampivarotramasoivohon'ny marketingmpanatanteraka marketingpinfluencerfifaninanana pinterestFivarotana Pragmatikafitsapana mivantanaWordPress
Manitatra ny mpamaky anao
Aug 14, 2008 amin'ny 7: 50 AM
Tsy nanao tsara aho. 60% momba ny tenako. Saingy tsy azoko antoka fa azoko izany. Ny bilaogiko. Tsy voatery hiezaka hiresaka momba ny mpanjifako aho. Miezaka miresaka * amin'izy ireo aho, izay tsy azo ihodivirana, izay mahatonga ahy hampiasa teny toa ny "izaho" sy "izaho". Raha toa aho ka totohondry ao amin'ilay tranokala sisa tavela, dia mety hidina hatramin'ny 10% na latsaka ilay anton-diany "me".
Aug 14, 2008 amin'ny 10: 33 AM
Manaiky aho, Patric. Fanamarihana kely fotsiny io mba hahitana raha miresaka momba ny tenanao foana ianao na tsia. Na dia miresaka momba ny tenantsika aza isika dia heveriko fa zava-dehibe ny hametrahana azy io ho an'ny mpihaino. Miresaka momba ny tenako betsaka ao amin'ny bilaogy aho, saingy manandrana mampita ny antony maha-zava-dehibe azy ireo izany!
Aug 14, 2008 amin'ny 8: 42 AM
Fitaovana mahafinaritra! Mitovy amin'ny Patric no naotiko. Amin'ny maha-toro lalana azy, mahasoa izany, na dia ekeko aza fa maro ny miovaova izay misy fiantraikany amin'ny lanjan'ny isa iray. Ny fandrefesana ny bilaoginao rehefa mandeha ny fotoana, manaraka ny fironana, dia mety ho sarobidy kokoa noho ny mijery isa manokana.
Aug 14, 2008 amin'ny 9: 05 AM
Amin'ny Marketing Pilgrim, miresaka momba ny "ianao" 60% amin'ny fotoana ianao. Faly aho amin'izany, satria mamaky ny bilaogy ny olona raha te hahalala ny hevitray momba ny “marketing” sy ny vokatr'izany “amin'izy ireo.” Ka mahay mandanjalanja tsara.
Ankehitriny, rehefa tena mivarotra vokatra na serivisy ianao dia tokony ho tanjona kendrena ny 90%.
Fitaovana mahafinaritra Doug!
Aug 14, 2008 amin'ny 10: 37 AM
Manaiky aho, Andy. Heveriko fa singa iray manan-danja amin'ny bilaogy IS ny miresaka momba anao mba hahafahan'ny mpitsidika manangana fifandraisana aminao manokana ary koa amin'ny matihanina.
Aug 14, 2008 amin'ny 9: 55 AM
Faly ianao fa nahafinaritra anao ilay boky. Ity dia dingana voalohany mahatalanjona amin'ny fanombanana ny toerana misy anao amin'ny spectrum Tuned In. Misaotra nizara azy. Izahay koa mijery fomba mitovy amin'izany hanombanana ny fahaizantsika mahatsapa tsena, mamorona vokatra hamaha ny olan'ny tsena tena izy ary hametraka vahaolana izay mihaino ny mpividy. Manantena ny hizara azy ireo aminao sy ny mpiara-monina aminao aho.
Phil, Craig ary David
Aug 14, 2008 amin'ny 10: 35 AM
Misaotra betsaka tamin'ny fijanonana! Tena nankafiziko ilay boky ary nankasitrahako ny fangaraharan'ny ekipanareo - mazava ho azy fa tena nalain'ny olona tokoa ny fahalalanareo sy ny zavatra niainanao nandritra ny taona maro ary napetrako tao anaty fonony tokana izany rehetra izany. Asa tsara!
14 Aogositra 2008 amin'ny 2:46 PM
Misaotra ny fitaovana Doug. Nahazo 50-50 aho. Ho an'ny tranokala bilaogy izay mety ho fifandanjana tsara toa ny nolazain'i Andy.
Ho an'ny tranokala ecommerce marobe, tsy maintsy mieritreritra azy ireo mihoatra ny bokikely an-tserasera amin'ny orinasa fotsiny isika. Mazava ho azy fa ny teny "ianao" na "anao" izay miseho amin'ny tranokala (mailaka mivantana na dokam-barotra na inona na inona) izay manolotra vokatra / serivisy dia ho lasa varotra tsara kokoa noho izay manana "I" sy "izaho" betsaka kokoa izany. Ireo no fotokevitra fototra ao ambadiky ny fanoratana tena tsara.
Boky fanoratana kopia tsara hanombohan'ny olona ny boky klasika nosoratan'i Claude Hopkins, doka siantifika. Ity dia TSY MAINTSY VAKIO (raha mbola tsy nanao izany ianao) ary maro amin'ireo tompona orinasa nahomby indrindra no nampiasa azy io hanovana ny varotra orinasan'izy ireo hampisondrotra ny varotra. Na ho an'ireo izay efa namaky azy aza, dia mandoa azy ny mamaky azy io imbetsaka.
14 Aogositra 2008 amin'ny 5:10 PM
Fitaovana mahatalanjona inona izany. Misaotra namorona azy. Faly aho milaza fa nahazo ny bilaogiko ny 9. (Sitraka mafy ny eritreritro - alaivo sary an-tsaina hoe iray amin'ireo lehilahy nanoratra ilay boky raha isa maivana…) Tandremo, David
15 Aogositra 2008 amin'ny 7:17 PM
Me Points: 85 teboka hafa: 91
Mihevitra (5 amin'ny 10)
Hmmm… Heveriko fa mbola misy asa tokony hataoko amin'ny ahy.
Fitaovana marina na dia misaotra aza
Aug 16, 2008 amin'ny 7: 56 AM
Mahaliana… Tao anatin'ny 48 ora fotsiny dia lasa 9 ka hatramin'ny 8 ny bilaogiko. Tokony ho hitako ny antony !! David
18 Aogositra 2008 amin'ny 6:34 PM
Douglas, misaotra tamin'ny fizarana ny kajikao namboarina. Tena mpankafy ny boky Tuned In aho ary miasa amin'ny fitaovana manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ny fahatongavantsika fohy.
Liana aho hahita bebe kokoa momba ny fomba ahitanao ny isa. Efa nandefa fampahalalana momba ireo metrika ampiasainao hikajiana ny isa ve ianao? Tena hampiasa ny calculatoranao aho hanatsarana ny naotiko. Ny fahalalana ny fomba ahazoanao ny isa dia hanampy bebe kokoa. -Michael
18 Nov 2008 tamin'ny 5:25 PM
Misaotra an'i Douglas fitaovana tsara ary nandefa - toa ny ahy dia nahazo 10 10/XNUMX
(Me Points: 1 Points hafa: 80) Mieritreritra aho fa tokony hifantoka bebe kokoa amiko…
Angamba mety hanana fotoana hijanonana ao amin'ny bilaogiko ianao indraindray - http://www.kasumiseo.co.uk/ - Mibilaogy momba ny SEO sy ny Marketing amin'ny Internet aho (azo antoka fa hanome teboka fanampiny io !!!)
Noho ny fahalianana dia inona no heverinao fa vokatra mety indrindra amin'ny calculer-nao?